के बोटबिरुवालाई साँच्चै दुख्छ? - Nepal Readers
के बोटबिरुवालाई साँच्चै दुख्छ?
by रघु आदित्य
- यो हप्ता
“जगदीश चन्द्र बोसलगायतका वैज्ञानिक”ले बोटविरुवालाई पनि दुख्छ भन्ने प्रमाणित गरे” भन्ने भ्रमलाई तल सम्बोधन गरेको छु:
प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बोसले मुख्य रूपमा दुईवटा विरुवा: लज्जावती झार र Dancing plant वा Telegraph plantको अध्ययन गरी तिनमा बाह्य उत्तेजना (Stimulus: प्रकाश, ताप, स्पर्श आदि)को सञ्चार केमिकल/रसायनिक माध्यमबाट नभई विद्युतीय माध्यमबाट हुन्छ भन्ने पत्ता लगाए । तर उनको अध्ययनको निष्कर्षमा कतै पनि उनले विरुवाले पीडा महसुस गर्छन् भनेर कतै उल्लेख गरेका छैनन् l
विद्युतीय माध्यमबाट उत्तेजनाको सञ्चार हुने भएकाले र तिनको आधारभूत संरचनाका केही कुराहरू मेल खान गएकाले बोटविरुवाहरूमा हुने त्यस्तो प्रणालीलाई उनले वनस्पतीय स्नायुतन्त्र (Plant Nervous System) भन्ने नाम दिए जसलाई आधार बनाएर आज प्राय: अर्धज्ञानीहरूले बोटविरुवालाई पनि दुख्छ भन्ने भ्रामात्मक निष्कर्ष निकालेको पाइन्छ l १००वर्षअघि उनले गरेका अध्ययनदेखि अहिलेसम्म गरिएका अध्ययनका कुनै पनि सहकर्मी-समीक्षा गरिएका (Peer-reviewed) र मान्यता पाएका शोध-पत्रहरूमा कतै पनि विरुवाहरूले पशुहरूजस्तै दु:ख पीडा भोग्छन् भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छैन l यदाकदा विरुवाहरूले पनि पीडा महसुस गर्छन् भनेर ठोकुवा गर्ने एकल शोध-पत्रका निष्कर्षहरूलाई वृहत समिक्षापछि “भ्रमात्मक” भनेर खारेज गरिएको छ l
तर बोटविरुवा पनि जटिल प्राणी हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । तिनमा पनि हावा, पानी, घाम आदिको अनुकूलता ठम्याउने संवेदी प्रणाली (Sensory system) हुन्छ । केही विरुवामा त ध्वनी समेतको सूष्म संवेदनशीलता पाइएको छ । खतरा, पोषक तत्व इत्यादिकोबारे सञ्चारका लागि जमिनमुनि जराहरूको संजालमा आधारित अल्पविकसित सञ्चार प्रणाली समेत उनीहरूले प्रयोग गर्छन् । तर जगदीश चन्द्र बोसले नामाकरण गरको ‘वनास्पतीय स्नायुतन्त्र’ र पशुपंक्षीको स्नायुतन्त्रका हरेक तहमा अत्यन्तै गहन भिन्नता छन् । अहिलेका लागि हामी तिनको पीडा सञ्चार गर्ने क्षमताबारे मात्र कुरा गरौँ ।
पीडा भनेकै नोसिसेप्टर्स /पेन रिसेप्टर्सको कार्यक्षेत्र हो l पेन रिसेप्टरहरू पशुहरूको शरीरमा मात्र हुने अत्यन्तै विशिष्टीकृत (Specialized)संवेदी न्यूरोन् हुन् l हाम्रै शरीरमा पनि यी पेन रिसेप्टर जहाँजहाँ छन् त्यहाँत्यहाँ मात्र हामीलाई पीडा महसुस हुनेगर्छ । हाम्रो शरीरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग – हाम्रो मस्तिष्कमा समेत पेन रिसेप्टरहरू नहुने भएकाले हामीले आफ्ना मस्तिष्कमा कुनै पीडादायी कुराको संवेदना लिन सक्दैनौं । अर्थात्, हाम्रो खप्परलाई खोलिसकेपछि कुनै सुइरोले हाम्रो मस्तिष्कमा घोंचेपनि हामीले चाल पाउँदैनौं । त्यसैले मस्तिष्कको शल्यक्रिया गर्दा बिरामीलाई पूरै होशमै राखेर समेत गर्ने गरिन्छ । (मस्तिष्कमा कुनै पेन रिसेप्टर हुँदैन भने हाम्रो टाउको बेलाबेला किन दुख्छ भन्ने जान्न यो लिंकमा जानुस्: If the brain can’t feel pain, why do I get headaches?
पीडाबोधको औचित्य नै शरीरलाई खतरा वा हानीबाट जोगाउनु हो । हामी (स्तनपायी, पंक्षी, सरीसृप/reptiles उभयचर/ambhibians, माछा लगायतका पशुपंक्षी)मा पेन रिसेप्टरहरू हुनुको कारण भनेकै हामीले पीडाबोध हुने बित्तिकै आफ्नो शरीरलाई पीडाको श्रोतबाट हटाउन सक्नु हो । तर विरुवाहरूलाई हिर्काउँदा, पोल्दा वा घोंच्दा तिनले आफूलाई वा आफ्ना अंगलाई तुरुन्तै खतराको श्रोतबाट हटाउन नसक्ने (वा Reactive movement गर्न नसक्ने) भएकाले तिनका लागि पीडा महसुस गर्नुको कुनै लाभ (Evolutionary advantage)हुँदैन र त्यसैले इभोल्युशनले नै उनीहरूलाई पीडा बोध गर्ने हामी जस्तो क्षमताको दिएको छैन । लज्जावती झारजस्ता केही रियाक्टिभ प्रजातिहरूमा समेत अल्पविकसित ‘टच/स्पर्स रिसेप्टर वा मेकानोसेप्टरहरू’ मात्र हुन्छन् – ‘पेन रिसेप्टरहरू’ बिल्कुल हुँदैनन् (टच रिसेप्टर र पेन रिसेप्टर अलग-अलग कुरा हुन्) ।
पशुपंक्षीले भोग्नसक्ने भावनात्मक दु:ख-पीडाको तुलना त बोटबरुवासँग गर्दै नगरौं । भावनात्मक चोट, त्रास, प्रेम, लगाव आदि महसुस गर्नका लागि विरुवाहरूमा आवश्यक संरचनात्मक जग नै हुँदैन ।
“तर बोटविरुवा पनि त जीवित प्राणी नै हुन् नि होइनन् र ?”
सुन्दा अनौठो लाग्ला तर शाकाहार अभियान भनेको वास्तवमा जीवन बचाउनु र मृत्यु हुन नदिनुमा केन्द्रित विषय नै होइन । जीवन त रोग लगाउने जीवाणुको पनि हुन्छ । यसको अर्थ औषधी नै नखानु भन्ने कदापी होइन । तर मासु र अन्य कुराका अनेकन विकल्प हुँदाहुँदै हामीले अरू प्राणीलाई दिने *अनावश्यक* शारीरिक र मानसिक दुःख, यातना/सास्तीलाई सम्भव भए सम्म हटाउनु वा घटाउनु अहिले विश्वभर चलिरहेका शाकाहार अभियान (Vegan movements) हरुको मुख्य उद्देश्य हो ।
आफ्नै बलि दिएर अरू कसैलाई बचाउने कुरो तर्कसंग कुरो हुँदैन । मरूभूमिमा केही खान नपाए मानिसले एकअर्काको लास नै खाए पनि त्यो अपराध हुँदैन । प्राकृतिक मांसाहारीसँग पनि मासु खानुको विकल्प नै हुन्न । तर हामी ७.५मध्ये अधिकतर मानिससँग आज मासुजन्य कुराका प्रशस्त विकल्प छन् । यसर्थ, मासु र पशुजन्य हामीले छाड्ने हो भने पृथ्वी र वातावरणका लागि पनि त्यो हितकर हुनेथियो । पशु उद्योगमा पशुपंक्षीले जति कष्ट आज पाइरहेका छन्, त्यो पनि घट्नेथियो । आखिर मानवजाति समग्र पृथ्वीमा न्याय र शान्ति चाहन्छ होइन र ?